महाबिर पुनलाई ऋण चाहियो : बैंकले पत्याएनन्, आउनुहोस सहयोग गरौ ! – Ranga Pati
काठमाडौँ – समाजसेवी तथा सूचना प्रविधि अभियन्ता महावीर पुनले ऋणको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्।
ऋण दिन बैंकले नपत्याएपछि पुनले सामाजिक संजाल मार्फत ऋणको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेका हुन्। सामाजिक संजाल मार्फ पुनले आफूलाई २ वटा परियोजनाको लागि ३ करोड रुपैयाँ आवश्यक परेको तर नेपाली बैंकले नपत्याएको जानकारी गराएका छन्।
आफूले अघि सारेका सामुदायिक पर्यटन र साना साना प्रविधिका सामान बनाउने कारखानाको सपना साकार गर्नको लागि लगभग ३ करोड चाहिने भएता पनि सरकार र बैंकबाट सगयोग नमिलेपश्चात सार्वजनिक आह्वान गर्न परेको उनको भनाई छ।
“बिश्वासको भरमा ४% बार्षिक ब्याज दरमा मेरो नाममा ऋण दिने नरम हृदय भएको कोहि नेपालीहरु अथवा समुहहरु हुनु हुन्छ अमेरिका, क्यानाडा, युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया र अन्य देश तिर बस्ने? यो ऋण मैले दुई ओटा महत्वपुर्ण कामको लागि खोजेको हो। करिब ३ करोड चाहिएको छ। एउटाले नै सबै रकम ऋण दिनु पर्छ भनेको होइन. सकेको ५, १०, २० लाख दिए पनि हुन्छ।”,सार्वजनीक आह्वान गर्दै पुनले फेसबुकमा लेखेका छन्।
विभिन्न वित्तीय संस्था र बैंकहरुबाट ऋण पाउन गाह्रो भएको हुँदा विश्वभर रहेका नेपाली माझ आफूले सार्वजनिक आह्वान गरेको उनले फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले जानकारी गराए अनुसार ऋण तीन वर्षको लागि मात्र चाहिएको छ।
हेर्नुहोस उनको भनाई
बिश्वासको भरमा 4% बार्षिक ब्याज दरमा मेरो नाममा ऋण दिने नरम हृदय भएको कोहि नेपालीहरु अथवा समुहहरु हुनु हुन्छ अमेरिका, क्यानाडा, युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया र अन्य देश तिर बस्ने? यो ऋण मैले दुई ओटा महत्वपुर्ण कामको लागि खोजेको हो. करिब ३ करोड चाहिएको छ. एउटाले नै सबै रकम ऋण दिनु पर्छ भनेको होइन. सकेको ५, १०, २० लाख दिए पनि हुन्छ.
पहिलो काम नेपालमा नै नभएको पूर्ण रुपमा दुर्गम ग्रामिण समुदायलाइ मात्र फाइदा दिने मोडेलको सामुदायिक पर्यटन अथवा Community Owned Eco-tourism बिकासको लागी हो. यो काम आंशिक रुपमा बिगत १० बर्ष देखी चलीरहेको छ तर यसलाई हामी बढाउन (Scale up) चाहन्छौं. यसको लागि नेपाल सरकार र बैंकहरु संग सहयोग लिने प्रयास गरियो तर कुनै सहयोग नपाए पछि ऋण खोज्दैछु. यसको बिस्तृत जानकारी चाहिएमा मलाई सम्पर्क गर्नु होला. यसको लागी एक करोड रुपैंया चाहिएको छ.
दोश्रो काम राष्टिय आविष्कार केन्द्रको लागी एउटा सानो स्केलको “सामानहरु बनाउने कारखाना अर्थात् Manufacturing Plant” बनाउन जरुरी भएको छ. आविष्कार केन्द्रमा सफलतापुर्बक अनुसन्धान भएका बस्तुहरुलाई सानो स्केलमा उत्पादन गरी बजारमा बेच्न र बजार परिक्षण गर्नको लागि यस्तो प्लान्ट चाहिएको हो. बिभिन्न वित्तीय संस्था र बैंकहरु बाट यस्तो ऋण पाउन गाह्रो भएको हुनाले नरम हृदय भएको दाताहरु संग ऋणको लागी अनुरोध गरेको हो. यसको लागी दुई करोड रुपैंया चाहिएको छ.
कोहि हुनु हुन्छ भने मलाई [email protected] मा सम्पर्क गर्नु होला. यसो गनु भयो भने देशको उद्धार हुनेछ. ऋण ३ बर्षको लागि हो र साँवा ब्याज नेपाली मुन्द्रामा तिरिनेछ.
हेर्नुहोस उनको आर्को भनाई
४% बार्षिक ब्याज दरमा ऋण दिन मेरो अनुरोध लाई सकारात्मक रुपमा हेरी दिनु भएको सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई धेरै धेरै धन्यबाद छ. अब अघि बढौं. खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु आबश्यक छ.
ऋण माग्नुको पहिलो कारण यस प्रकार छ. मैले Visit Nepal 2020 लाइ लक्ष्य गरेर पदयात्रा गर्ने पर्यटकहरु भित्र्याउने दुई ओटा योजना बनाएर संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई 2018 देखि नै अनुरोध गरेको थिएँ. पहिलो योजना Round Dhaulagiri Trekking Route को बिकास गरेर त्यहाँ आबश्यक पर्ने सम्पूर्ण बन्दोबस्त गर्ने र 2019 मा नै ट्रेकिंग सुरु गर्न भन्ने थियो. दोश्रो योजना हामीले पहिले नै सुरु गरेको पदमार्गमा भएको सामुदायिक लजहरुमा पर्यटकहरुको चाप थेग्न अति आबश्यक परेकोले थप कोठाहरु बनाउने भन्ने थियो. यो काम किन आबश्यक छ भने पूर्वाधार नबनाईकन पर्यटक भित्र्याउन सकिंदैन र नेपाल आएका पर्यटकहरुलाई पनि राम्रो सेवा दिन सकिंदैन. तर संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले मेरो प्रस्ताब सुन्दै सुनेनन. २५ लाख रुपैंया सम्म सहयोग गर्नुहोस भन्दा पनि सरकारले टेरेन. बैंकहरुले मैले प्रस्ताब गरेको जस्तो मोडेलको सामुदायिक कुरामा लगानी नै गर्दैनन्.
ऋण माग्नुको दोश्रो कारण राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अहिले भैरहेको अनुसन्धानको कामहरु मध्य ५ ओटा कामहरु चांडै नै सफल हुने आशा गरिएको छ. तिनीहरुलाई सानो स्केलमा उत्पादन गरेर बजारीकरण गरि अनुसन्धानकर्ताहरुलाई उद्यमी बनाउनको लागि तुरुन्तै एउटा सानो स्केलको “सामानहरु बनाउने कारखाना अर्थात् Manufacturing Plant” बनाउन जरुरी भएको छ. यसो गरेर उनीहरुलाई उद्यमी बनाइएन भने हाम्रा प्रतिभाशाली सन्ततिहरु नेपालमा बस्दैनन्. यसको लागि ३ र ४ नम्बर प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरु संग कुरा भएको हो. उनीहरुले मुखले मात्र हुन्छ हुन्छ भने तर यस्तो काममा पटक्कै चाख देखाएको देखिएन. बैंकहरुले यस्तो काममा ऋण दिंदैनन भन्ने थाहा भयो.मुख्य कुरा यहि यहि नै हो. धन्यबाद.
जसलाई राजा वीरेन्द्रले अँगालो मार्दै भने- ओहो, हाम्रो देशको हिरो!
Posted on November 23, 2019 Author rangapati
सीताराम कोइराला गत साताको भेटमा धावक बैकुण्ठ मानन्धरले ३२ वर्षअघिको एउटा चुम्बनको कथा सुनाए। सन् १९८७। एसियाली महासंघ खेलकुद (साफ) भारतको कलकत्तामा हुँदै थियो। नेपाली एथ्लेटिक्स टिम प्रशिक्षणमा जुट्यो। पोखरामा बन्द प्रशिक्षण थियो। अघिल्ला दुई साफमा लगातार स्वर्ण जितेका म्याराथन धावक बैकुण्ठ प्रशिक्षणका आकर्षण थिए। सधैं उनको अघिपछि कि खेलाडी हुन्थे, कि फ्यान। जनतामाझ पनि […]
नेकपाका गुणराज लोहनी पक्राउ
Posted on October 23, 2019 Author rangapati
￼काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवम् रातो खबर साप्ताहिकका पूर्वनिर्देशक गुणराज लोहनीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । मङ्गलबार बिहान सादा पोसाकका प्रहरीले लोहनीलाई चितवन स्थितडेराबाटै गिरफ्तार गरेको जानकारी पारिवारिक स्रोतले दिएको छ । स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएपछि लोहनी लामो समयदेखि घरमै आराम गरिरहेका थिए । उनी उपचारमा थिए । उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या […]
दुई खर्ब ८२ अर्बका उद्योग खुल्दै, नेपालमै रोजगारीको अवसर !
Posted on July 22, 2019 Author rangapati
६ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४३६ वटा नयाँ उद्योग दर्ता गरिएका छन् । ती उद्योगमा दुई खर्ब ८२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लगानीको योजना छ । उद्योग विभागका अनुसार, कृषि तथा वनजन्य, निर्माण, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, खनिज, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा नयाँ उद्योग सञ्चालन हुन लागेका छन् । आर्थिक वर्ष ७५/७६ […]